खै के आश गर्नु ?
अधिवक्ता गंगा दहाल- -
गंगा दहाल– २०७७ पौष ५ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे पश्चात नेकपा भित्र उत्पन्न भएको बिभाजनको अवस्थाले हरेकको मन मस्तिष्कमा अनौठो तरङ्ग साथै अव के पार्टीको के होला, देशको के होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ ।
को को कुन कुन कित्तामा रहने भन्ने कुराको पार्टी कमिटीहरु देखि लिएर प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभाका, संसदका सांसदहरुमा चासोको बिषय बनेको देखिन्छ । लाग्नेहरु एउटा एउटा पक्षमा लागेर मारमुङ्ग्री गर्न थालेका छन् । हिजोसम्म एउटै पार्टीको छाता ओड्नेहरु छाता च्यात्न थालेका छन् । एकदोस्राको खुट्टा तानातान गर्न थालेका छन् । एकले अर्कोलाई खराव देख्न थालेका छन् ।
अब नेकपाको स्थिति कस्तो होला भन्ने जनचासोको बिषय बनिसक्यो । अर्कोतिर जन भावनामा एक खालको निरासा उत्पन्न भएको देखिन्छ । जनतासँग दुई तिहाइ नेकपाले माँगेकै हो र जनताले दिएका पनि हुन् । जनताको त्यो भरविश्वास, आशा कता गयो ? यति चाँडै जनादेशको उपेक्षा हुनगयो ?
दुई तिहाईको जनादेश पाएर पनि समयावधि भर सरकारले स्थायित्व लिन सकेन । अन्तर विवाद भएकै कारण यो उच्च–जनादेशलाई बेवास्ता गर्नु लत्याउनु कतिसम्म उचित होला ? जनताले भरोसा गर्ने कुन आधार छ फेरि यस्तै नहोला भन्ने ? कुन प्रमाण दिन सकिन्छ फेरि अब ? नेकपाको बल, एकता, जनविश्वासलाई भताभुङ् पारेर छताछुल्ल पारिएको छ । यसमा तल्लो निकायका कार्यकर्ताको कुनै दोष छैन । दोष छ त केन्द्रीय नेताहरुको छ । पार्टीका अगुवाहरुले पार्टीलाई सडकमा ल्याए । पार्टीकै एकथरि नेताले अर्कोथरिलाई गालीगलौज गर्ने, अपमानित गर्ने, दोषारोपण गर्ने, एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचार, नालायक भन्नेसम्मका क्रियाकलापहरु सडक सडकमा देखिन थालेका छन् । यो अवस्था आउनु थियो भने पार्टी एकीकरण नै किन गरेको ? नेकपाका लागि दिनरात मेहनत गर्ने कार्यकर्ताहरुले अव कुन मुखले जनतासम्म जाने ? लज्जा पनि लज्जित भयो ।
नेकपाको घरभित्रको समस्या थियो मिलाउन सकिएन भन्दा कतिसम्म लाजमर्दो कुरा छ । जसले घर मिलाउन सक्दैन, त्यस्तो पार्टीले समाज, सहर, देश कसरी एकतावद्ध पारेर अघि बढ्न सक्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देख्ने नेकपाले सपता कसरी पूरा गराउन सक्छ ? जुन बल नेकपामा थियो, त्यो खण्डित हुनपुगेको छ । विपक्षीले होइन, आफ्नै दलभित्रको झगडाले टुक्रा टुक्रा भएको हो । यस्तो टुक्रे शक्ति लिएर नेकपाले न सरकार हाँक्न सक्छ, न सपना पूरा गर्न सक्छ ? चुनाव भइहाल्यो भने न त चुनाव नै जित्न जिताउन सकिन्छ ?
नेपाली जनताको बलिदान त्याग र संघर्षको औचित्यता कहाँ देखियो खै ? ती विरहरुको रगत यस्तै दिन देख्नको लागि बगेको थिएन । अब राजनीति स्थिरता स्थायित्वको कल्पना पनि गर्न नसकिने जस्तो देखिनु कहाँसम्मको बिडम्बना होला ? आपसी समझदारी र सहकार्य गरेर मिलाउनै नसकिने भन्ने पनि हुन्छ र ? अब स्वाभिमान र ईमान सधै भरी बन्धक भैरहने हो भने नेकपाको कालो वर्तमानले भविष्यलाई समेत अन्धकारमा धकेलिदियो भन्दा हुन्छ ।
नेताहरु एउटा सत्तामा र अर्को सडकमा सुतेर एकले अर्कोलाई प्रहार गरिरहेका छन् । एउटाले सर्प, अर्कोले गोमन भनिरहेका छन् । चुनावका बेलामा नेकपाले जुन जुन वचन दिएर भोट माँगेका थिए, ती वचनहरु पोखिएको पानी भयो । बगेको पानीलाई कसरी उठाउन सकिन्छ र ? नेपाली जनताको जिवनस्तरमा आमूल परिवर्तनको खै के आस गर्नु ? नेकपा निरश र निराश भयो ।